पत्नीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै काकाले गरे भतिजको हत्या ! - नेपालबहस
पत्नीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै काकाले गरे भतिजको हत्या !
| १०:२१:०८ मा प्रकाशित
२८ फागुन, रुपन्देही । रुपन्देहीको गैडहवामा पत्नीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै एक जनाको हत्या गरिएको खुलेको छ । गैडहवा गाउँपालिका-६ स्थित गुलरियाका २६ वर्षीय दिनेश लोधको हत्या भएको पुष्टि रुपन्देही प्रहरीले गरेको छ ।
हत्या गरेर फालेको अवस्थामा १७ मंसिरमा सोहि स्थानको पर्सा-कलौनी सडक खण्डको पूर्व किनारमा शव फेला परेको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी र ईलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुराको टोलीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्दा सोही स्थानका ३१ वर्षीय रामवरण लोधले हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
घटनास्थलबाट उठाइएका सबुद प्रमाण, प्राविधिक पक्षको विश्‍लेषण र बुझिएका स्थानीय मानिसहरू समेतको भनाइको आधारमा मृतकको हत्या रामवरण यादवबाट हुन आएको खुलेको छ ।
दिनेश लोधको आफ्नी पत्नीसँग अनैतिक सम्बन्ध रहेका कारण हत्या गरेको रामवरण लोधले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी र इलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुराको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । घटनामा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा अनुसन्धानका लागि तालिमप्राप्त कुकुरको पनि प्रयोग गरिएको थियो ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि रामवरण लोधलाई प्रहरीले लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका-७ शिवगढियाबाट पक्राउ गरेको थियो । हाल घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्याङयोङ्गको आईएमएस मोटर्सले ल्यायो नव वर्ष अफर १७ मिनेट पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो २१ मिनेट पहिले
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह २३ मिनेट पहिले
दिनदिनै महामारी फैलिदैछ तर सावधानी छैन, जोखिम उच्च ! ४७ मिनेट पहिले
संक्रमण बढेपछि भारतीय सीमावर्ती शहर रुपैडिया जान रोक ३ हप्ता पहिले
नेपालले एमाले विभाजन गर्लान कि प्रचण्डको साथमा जालान ? २ हप्ता पहिले
जाजरकोटमा मन्त्रीलाई कुरा सुनाउन सडकमै ज्ञापनपत्र १ वर्ष पहिले
क्रियाशिल महिला पत्रकार काभ्रेको अध्यक्षमा सजना आचार्य २ वर्ष पहिले
ताङग्या गाउँमा मोबाइल फोन सेवा विस्तार १ वर्ष पहिले
उत्साहका साथ खोप लगाउन आउँछन् ज्येष्ठ नागरिक १ महिना पहिले